शाहरुख खानकी छोरी सुहानाले एटिएम कार्ड राखेर सेल्फी खिचेपछि… - Glamorous Icon
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १२:२४
Home›GIcon News›शाहरुख खानकी छोरी सुहानाले एटिएम कार्ड राखेर सेल्फी खिचेपछि…
शाहरुख खानकी छोरी सुहानाले एटिएम कार्ड राखेर सेल्फी खिचेपछि…
बलिउडमा पछिल्लो समय स्टार किड्सले धूम मच्चाइरहेका छन् । कतिले फिल्ममा डेब्यु गरिसकेका छन् भने केही डेब्युको तरखरमा छन् । चर्चामा आइरहने स्टार किड्समा शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान पनि पर्छिन् ।
सुहानाले फिल्ममा त अझै डेब्यु गरेकी छैनिन् तर उनका फ्यान फलोइङ कुनै स्टार कलाकारको भन्दा कम छैन ।
यही कारणले सुहाना सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहने गर्छिन् । हालै भने सुहाना सामाजिक सञ्जालमा एउटा यस्तो तस्वीर शेयर गरेकी छिन्, जसका कारण उनी चर्चामा छिन् । एक तस्वीरमा उनले ऐनाका अगाडि तस्वीर लिएकी थिइन् । उक्त तस्वीरमा उनको फोनको कभरमा एटिएम कार्ड देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सुहानाले अपलोड गरेको उक्त तस्वीर आफैमा ग्ल्यामर छ । अर्कातिर युजर्सले कमेन्ट गरेका छन्, सुहानाले एटिए कार्ड आफ्नो फोनमै राखेर हिँड्ने गर्छिन् ।
एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, मोबाइलको कभरमा एटीएम कार्ड छ, पक्कै पनि यो कार्डमा करोडौँ रुपैयाँ छ, लक्की गर्ल । सुहानाका कतिपय तस्वीरलाई त झन् युजर्सले ट्रोल बनाउने गर्छन् । तर सुहानाले भने ती कमेन्टलाई इग्नोर गरिदिन्छिन् ।
कतिपय फ्यानले उनलाई फिल्ममा अभिनय गरेको देख्न चाहेका छन् । तर, सुहाना भने आफ्नो पढाइ पूरा गरेपछि मात्र यो क्षेत्रमा आउने योजनामा छिन् ।
‘थम्स् अप’ राजेश हमालको सिग्नेचर पोज ?
‘बोलमाया’पछि प्रकाशले बुने यस्तो ‘गलबन्दी’
GIcon NewsGIcon NewsGLAM SgementVideo
Ashmi Shrestha victorious at Miss Nepal 2016
प्रियंकासँग सेल्फी लिने पुष्पलको रहर होला त पूरा ?
महको ‘सत्रुगते’ घोषणा